Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị n’Ajentina
Olee oge i kwesịrị irute n’ụbọchị ị chọrọ ịbịa legharịa anya? Iji hụ na ndị bịara ilegharị anya n’otu oge akarịghị akarị, biko abịala ihe karịrị otu awa tupu oge ị chọrọ iji malite ilegharị anya eruo.
Alaka ụlọ ọrụ a na-ahazi ọrụ ikwusa ozi ọma Ndịàmà Jehova nọ n’Ajentina na Yurogụwaị na-arụ. Ha na-asụgharị akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Ajentina, n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Romani (Ajentina), n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Yurogụwaị, nakwa n’asụsụ ise ndị ọzọ a na-asụ n’Ajentina. Ha bụ asụsụ Korote, Pilaga, Kichua (Santiago del Estero), Toba, na asụsụ Wiki.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị n’Ajentina.